ဒီပို့ ကိုတင်ခြင်နေတာ ကြာပါဘီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒီပို့ ကိုတင်ခြင်နေတာ ကြာပါဘီ
ဒီပို့ ကိုတင်ခြင်နေတာ ကြာပါဘီ
- Pyaung Gye
Posted by Pyaung Gye on Aug 11, 2010 in News |0comments
ကိုယ်လိုဘဲပြောချင်တာကြာေ၇ာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းစင် တတ်တာ ကြီးသွားတာ၉ သူနဲ့ narziparty ပြောသလိုပါဘဲ ကိုယ်လဲ နယ်စုံ ဆိုင်စုံ ထိုင်ဘူးပါတယ် အဲလိုမျိုးတွေကြည့်ဘဲလေ ဒါတွေမြင်ရင် တည့်တည့်ပြောရရင် ရွံ လွန်းလို့ မျက် စိ နောက် – အာရုံပျက် – စိတ်ပျက်ဘဲလေ – ဒီလိုဟာတွေ တော်တော်အား နေကြတယ် အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ အချိန်ကုန်။ ငွေကုန်။ အလုပ်ပျက် ( အလုပ်မှ မရှိတာ၉။ အားယားနေကြတာ ) ၁၀၉/၁၁၀ တွေလေ-
မိတွေကတော့၊ အော်- ငါ့သား၎ အင်တာနက် အင်တာနက်။ ငါ့သမီး၎ အင်တာနက် အင်တာနက် နဲ့ပေါ့မသိကြရှာဘဲ ကြိတ်ပြီးဂုဏ်ယူနေတယ် တချို့ကလဲ ငါ့သမီး၎က အင်တာနက်ထဲ မှာလင့်ရှာစရာတွေ နဲ့ ကျိုးစား နေ တယ်တော်နဲ့၊ ပြောပြတော့တာပေါ့….
အင်း……. ဒင်းတို့က ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဟို Q ဒီ Q နဲ့ အချိန်ဖြုန်း- မိဘလုပ်စာကို လိမ်ညာပြီး အဲကွန်းအခန်းထဲမှာ ဇိမ်နဲ့ပေါ့- ခုဆို ကိုယ်တော်ချောတွေက ဒါနဲ့အားမရသေး ဘူး- ဟိုတလောက forword mail ထဲကလို webcam နဲ့ နယ်ချဲ့သေးတယ် အော်………
အောက်တန်းစားတွေ….. အောက်တန်းစားတွေ….. (ကြားရင်တော့ — ဒူးမနာသားတွေစိတ်ဆိုးကြအုံးမှာ) တော်ပါဘီ
တိုးတက်ချင်ရင် တိုးတက်စရာ တွေကို ကြိုးစားရှာဖွေနိုင်ကြပါစေ……………
About Pyaung Gye
Pyaung Gye has written4post in this Website..
View all posts by Pyaung Gye →